Ụbọchị mbụ nke klas - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Nabata na BLI! Ị ga-emesị bụrụ ebe a! Anyị na-arụsi ọrụ ike iji mee ka ahụmịhe mmụta gị na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ ma na-arụ ọrụ.
N'ụbọchị mbụ nke ụlọ akwụkwọ gị, anyị ga-enwe ndị ọrụ enyi na ndị ọkachamara na-anabata gị mgbe ị bịarutere, ma enwere oge ọmụmụ ihe maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ niile ịmara iwu nke ụlọ akwụkwọ anyị. Anyị ga-enye gị nleta ụlọ akwụkwọ na gburugburu iji nyere gị aka ịmata ọnọdụ ọhụrụ ahụ.
N'oge nnọkọ ahụ, anyị ga-enye gị mmeghe banyere obodo ahụ, ozi ebe obibi yana ihe omume mgbe ụlọ akwụkwọ gasịrị. Enwekwara ihe nchekwa ozi nke ọma iji nyere gị aka ịlele ihe niile gbasara ụlọ akwụkwọ na ihe niile bara uru banyere obodo ahụ.
Ka anyị ghọtara na ị ga-atụ ụjọ na ụbọchị mbụ, ndị ọrụ na ndị nkụzi anyị ga-eduzi gị n'oge mgbanwe a. Anyị ga-anọ mgbe niile iji lekọta gị ma zaa ajụjụ gị niile. Ọ bụghị naanị gị!